१ बर्षमा ९४ अर्बले बढ्यो बेरुजु, भौतिक मन्त्रालयको सबैभन्दा बढि - BizKhabar Online
१ बर्षमा ९४ अर्बले बढ्यो बेरुजु, भौतिक मन्त्रालयको सबैभन्दा बढि
बिजखबर संवाददाता २०७४ चैत ३० (April 13, 2018) मा प्रकाशित
काठमाडौं । पछिल्लो १ बर्षमा ९४ अर्ब रुपैयाँले बेरुजु बढेको छ । सरकारले बेरुजु न्युनिकरण गर्न ताकेका गरेपनि पछिल्लो समय बेरुजु रकम झन् बढ्दै गएको महालेखा परीक्षकद्वारा सार्वजनिक ५५ औं बार्षिक प्रतिवेदनले देखाएकोे छ ।
तथ्याङक अनुसार गत आबमा २६ दशमलव २० प्रतिशतले बेरुजु बढेको छ । हालसम्म आईपुग्दा बेरुजु बढेर ५ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो आबमा रहेको बेरुजु ३ खर्ब ९६ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ रहेकोमा गत आबसम्म आईपुग्दा थप ९४ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बढेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
सो अबधिसम्म आईपुग्दा सबैभन्दा बढी बेरुजु भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको रहेको छ । भौतिकको २२ दशमलव ४३ प्रतिशत बेरुजु रहँदा अर्थ मन्त्रालयको १७ दशमलव ५ प्रतिशत, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासको १२ प्रतिशत, शिक्षाको ११ दशमलव ३८ प्रतिशत, रक्षाको ७ प्रतिशत रहेको छ ।
दैनिक साढे १० अर्ब पूँजीगत खर्च गर्नुपर्ने दबाबमा सरकार, असारे विकासले होला सम्भव !
श्वेतपत्र ल्याउन किन भयो ढिलाई ? यस्तो हुँदै छ तयारी !
आन्तरिक स्रोत बढ्नेगरी राजस्व नीति तर्जुमा गर्न अर्थमन्त्रीको निर्देशन, न्युन विजकीकरण रोक्न आग्रह